Tiny house "il tassobarbasso" - I-Airbnb
Indlu encane ibungazwe ngu-Isabella
U-Isabella unokuphawula okungu-57 kwezinye izindawo.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Isabella izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Kule ndlu encane (amamitha-skwele angu-25), ngaphakathi kwe-Camp Chisonetto, uzothola konke okudingayo ukuze uchithe iholide elimnandi, endaweni enhle nenempilo. Isikhala esivulekile esinegumbi lokugezela elincane elineshawa, ikhishi elinakho konke ukufinyeleleka, umbhede owusofa olala abantu ababili, ikamelo lokulala elinemibhede emibili elala abantu ababili, i-TV, ikhabethe, ibhokisi lama-drawer, itafula, ibhokisi lama-drawer nezihlalo.
Lapho ufika kufanele wenze i-chekin (KUSUKA ku-16.00 kuya ku-18.00) ehhovisi le-Camp Chisonetto, lungiselela amadokhumenti azoqoshwa futhi uzonikezwa ibheji lokuvula isango labahamba ngezinyawo lapho kukhokhwa, ngemali, yediphozithi engu-5 euros, ezobuyiselwa kuwe ngesikhathi sokuphuma ngesikhathi esifanayo nokukhokha Intela Yezivakashi. AWUKWAZI UKUNGENA ngemoto, kodwa ungapaka mahhala endaweni yokupaka eseduze. Phakathi nenkathi yasebusika kukhona isithuthi samahhala ukuya nokubuya ezindaweni ze-Via Lattea di Borgata.
I-Campsite Chisonetto iyindawo emnandi kokubili ehlobo nasebusika, ikunikeza izikhathi zokuphumula, ukuzijabulisa ngokusondelene nemvelo, kunamasevisi asanda kwakhiwa avamile atholakalayo anama-shower antofontofo, umshini wokuwasha, umshini wokomisa kanye ne-sauna yase-Finland ngemali. I-Sestriere Borgata iyindlu encane kodwa enakho konke ukunethezeka okuvela emathafeni okushushuluza eqhweni e-Milky Way, imakethe encane, isikole sokushushuluza eqhweni, ukuqashwa kwe-ski, indawo yokudlela ejwayelekile kanye ne-pizzeria, inkundla ye-beac volleyball, i-tennis, nenkundla yokudlala yezingane.
Indawo ye-Milky Way ingakunikeza ithuba lokuzijwayeza cishe noma yiluphi uhlobo lwezemidlalo, ukuhamba emvelweni, uhambo oluya ezindaweni ezithakazelisayo zamasiko nase-France eseduzane (Briancon, njll.), kanye namachibi okubhukuda nezikhungo zenhlalakahle.
Ngokuvamile ngikhona, usazosizwa izisebenzi zendawo yokukhempa, ezizokunikeza zonke izidingo zakho.